Anogona Wako Registrar Anokugura Iwe? | Martech Zone
Anogona Wako Registrar Anokugura Iwe?
China, Kukadzi 1, 2007 China, January 5, 2017 Douglas Karr
Nechiitiko chikuru pamusoro pekudzimwa kweGoDaddy mutengi (uyo parizvino ane mushandirapamwe wake: NoDaddy.com), ndakafunga kutarisa kune vamwe maRejista, kusanganisira yangu, kuti ndione kana vaigona kukweva ipulagi zviri nyore sezvakaitwa naGoDaddy. Iwe unotoshamisika, vashoma chete maRejista vane Mitemo yeSevhisi iyo inoseta zvimwe zvakanaka zvakasimba zvinodiwa pamusoro kukanzura:
16.2 Kumiswa kweDomain, kukanzurwa kana kuendesa. Unobvuma uye unobvuma kuti kunyoreswa kwesimba rako kunoenderana nekumiswa, kukanzurwa kana kuendesa (kukanzura kana kuendesa pamwechete kunonzi, "Kanzura") (a) kugadzirisa zvikanganiso naDotster, Inc., mumwe munyori, kana Registry Administrator mukutungamira iro zita kana (b) rekugadziriswa kwemakakatanwa ane chekuita nedomeini zvichiteerana neICANN mutemo kana maitiro. Iwewo unobvuma kuti Dotster, Inc. ichave nekodzero mukufunga kwayo kwekumisa, kukanzura, kuendesa kana neimwe nzira kugadzirisa kunyoreswa kwesizinda kusvika pamazuva manomwe (7) ekarenda chiziviso chisati chaitika uye mushure menguva yakadai seDotster, Inc. kurongeka kwakasimbiswa kubva kudare redzimhosva rine hunyanzvi, kana arbitration mubairo, unoda kumiswa, kudzima, kuchinjisa kana kuchinjisa kweinyoresa domeini.
DISCLOSURE: Ini ndakanyoreswa mumubatanidzwa weDotster asi ini zvakare ndiri wega fan yebasa ravo. Ndakaongorora kwavo kwazvino specials uye ndikawana ino yakakosha manheru ano yandinogona kuwedzera kune vangu vaverengi:
Chinja domeini yako kuDotster uye ubhadhara chete $ 8.99 yekuvandudza yako domain kune rimwezve gore. Click pano
HAKASANGANISWI MUMASHURE: Pasina muganho, anotevera haana kuverengerwa muMasevhisi: Hatigone uye hationgorore kuti tione kana zita remazita (mazita) aunosarudza, kana mashandisiro aunoita mazita edunhu, kana mamwe maSevhisi (ma), anotyora kodzero dzepamutemo dzevamwe. Ndiro basa rako kuziva kana zita renzvimbo (s) raunosarudza kana kushandisa rinokanganisa kodzero dzepamutemo dzevamwe. Tinogona kurairwa nedare kudzima, kugadzirisa, kana kutumira zita rako renzvimbo; ibasa rako kunyora ruzivo rwechokwadi rwehukama mukubatana neaccount yako uye kutaurirana nematare, vangangodaro vanokwikwidza, uye zviremera zvehurumende. Harisi basa redu kutumira mirairo yedare kana kumwe kutaurirana kwauri. Isu tichaenderana nemirairo yedare kunze kwekunge iwe ukabata isu kukwikwidza iwo marongero.
Iwe unobvuma uye unobvuma kuti Register.com inogona kumisa, kukanzura, kuendesa kana kugadzirisa mashandisiro ako eMasevhisi chero nguva, chero chikonzero, mukati meRejista.com kungwara uye pasina ziviso kwauri.
Kuganhurirwa kweMutoro. Pamusoro pekumwe kusakwana kwemutoro uri pano, unobvuma kuti Network Solutions haizovi nechikwereti chemhando ipi neipi yekurasikirwa kana chikwereti zvichikonzerwa nekugadziriswa kwechikumbiro chekunyoresa ne .TW Registry inosanganisira, pasina muganho, kugona kwako kana kusakwanisa kuwana rimwe zita rezita. Network Solutions haitore chikwereti chero chechikumbiro chekunyoresa kana kurambwa kwezita rezita, kumiswa, kudzima, kudzima, kukanganisa kana kufambisa nekuda kwenzira, mitemo kana marongero eTW Registry, TWNIC, kana nekuda kwezviito, tsika kana kufungira zvisizvo kwematare e mutemo kana gakava kugadzirisa vayananisi. Isu hatina mhosva kune chero zvichemo, kukuvara kana kukuvara kunokonzerwa nekumiswa kwemasevhisi anopiwa neTT Registry chero chikonzero, kusanganisira asi chisina kuganhurirwa nekumiswa kwe .TW Rejista yekunyoresa mvumo, kana kubhuroka kwayo.
AT & T Yahoo!
5.3 Kugumiswa neAT&T Yahoo!
AT & T Yahoo! inogona kumisa Mitemo iyi chero nguva paunokuzivisa. Kunyangwe hazvo pane chero chinhu chinopesana apa, AT&T Yahoo! Unogonawo, asi hauna basa, nekumisa nekukurumidza kana kumisa Sevhisi yako, kumisa kupinda kwako nephasiwedi, kubvisa Yako Service kubva kuAT&T Yahoo! maseva, kana kubvisa chero zvirimo mukati meSevhisi, kana AT&T Yahoo! inopedzisa, mukufunga kwayo kwega, kuti Iwe (a) watyora, ukatyora, kana kuita zvisingaenderane netsamba kana mweya weiyi Mitemo, kusanganisira chero anoshanda AT&T Yahoo! Policy kana chero mutemo unoshanda kana mutemo; (b) vakapa ruzivo rwenhema sechikamu cheAccount yako Ruzivo; (c) vari kuita zviitiko zvekubiridzira kana zvisiri pamutemo kana kutengesa zvinhu zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza kana masevhisi; kana (d) vari kuita zviitiko kana kutengesa kunogona kukuvadza kodzero kana mukurumbira weAT&T Yahoo! kana vamwe (yega yega "Kubviswa kweChikonzero"). Chero Kubviswa kweChikonzero neAt & T Yahoo! inozotanga kushanda ipapo, uye Unobvuma pachena kuti Hauzove nemukana wekurapa. Kana Yako AT&T Yahoo! ID inogumiswa chero chikonzero, aya maMitemo uye Kuwana kwako sevhisi kunogumiswa. Pamusoro pezvo, kana Iwe Wakanyoresa zita idzva renzvimbo pamwe chete neYako Sevhisi, uye AT&T Yahoo! inogumisa Sevhisi yako nekuda kwekumiswa kweChikonzero, ipapo AT&T Yahoo! inochengetera kodzero yekukumbira iyo domain zita mupi kuti ibvise iro duraini zita kubva kuzita registry registry uye / kana kuendesa zita rezita kubva kwauri kuenda kuAT&T Yahoo! Iwe unobvuma kuti iko AT&T Yahoo! inoendesa yakadai zita renzvimbo kuAT&T Yahoo! pasi peChikamu 5.3, AT&T Yahoo! inobata kodzero dzese dzeakanyoreswa zita rezita rekuremekedza maererano neiyo domaini zita, kusanganisira kodzero yekutengesa zita rezita kune wechitatu bato (uko iyi yaive kodzero yakachengetwa newe semunyori wepakutanga mukuremekedza izita rakakodzera rezita) .
6.5 Isu tinochengetera kodzero, mukuziva kwedu chete, kumisa kana kumisa kupinda kwako kuWebhusaiti yedu uye neMasevhisi anoenderana kana chero chikamu chayo, chero nguva, pasina ziviso. Tichagumisa chero kutyora kwemitemo yedu yebasa kana chero chiitiko chinoreva kushandiswa zvisiri pamutemo kana kurambidzwa sezvatsanangurwa pano.
Kana Wakatenga maSevhisi, Go Daddy havana chisungo chekutarisa Mashandisiro ako eMasevhisi. Endai Baba vanochengetera kodzero yekuongorora Mashandisiro Ako maSevhisi uye kudzima maSevhisi mukufunga kwayo kwoga. Endai Baba vanochengetera kodzero yekumisa Kuwana kwako maSevhisi chero nguva, pasina ziviso, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho.
Ini handisi gweta, saka ini handisi kuraira chero munhu kuti ndiani waanofanirwa kana kusafanira kunyoresa domains ake. Ndine chokwadi chokwadi chekuti zviri pamutemo zvandakawana mune girini zvakanaka uye yero yakaipa. Mitemo yebasa iyo inotaura kuti vanogona kudonhedza sevhisi yako pasina ziviso, pasina chiziviso chidiki… kana ivo vangatogona chengeta rako renzvimbo zita rinotyisidzira heck kunze kwangu !!!
ONA: Mukutarisa zvirevo zveGoogle, zvinoita sekunge vanoshandisa GoDaddy kana eNom… asi handisi kuziva kuti ndeipi kana sei. Kuzarura kwakakwana: Ini ndakagadzira iyo NoDaddy logo. Ini ndinobatana kushambadzira neCommission Junction uye ndakapihwa mvumo yekutumira zvakabatana kushambadzira kune vese Dotster naGoDaddy. Muchokwadi, iwe uchaona imwe yeGoDaddy kushambadza pane ino peji! Handina kusvika pakuisarudza.
Tags: pa & tinotongwadomain registrardotsteranegodaddymydomainmydomain.comnetwork mhinduronodaddyregistrar.comYahoo
Cocaine uye Blogging
Iwe wakangwara kupfuura Mark Cuban?
Jun 11, 2007 pa 11: 12 PM
Hapana matambudziko neyangu domain registrar GoDaddy, zvakadaro.